Mutungamiri weEquatorial Guinea VaObiang Nguema Mbasogo Vosangana naVaRobert Mugabe
Chivabvu 25, 2018
VaRobert Mugabe nemutungamiri weEquatorial Guinea VaTeodoro Obiang Nguema Mbasogo
Mutungamiri weEquatorial Guinea VaTheodoro Obiang Nguema Mbasogo nemusi weChishanu vakasangana nevaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vakasanganazve nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vachipeta kushanya kwavo kwemazuva maviri.
VaMbasogo vakaita musangano naVaMugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorrowdale uyo wakatora maawa maviri vakazonosanganazve naVaMnangagwa pamberi pemusangano uyu.
Vatori venhau vakarambidzwa kupinda paBlue Roof nevasori avo vakati musangano waVaMbasogo naVaMugabe haunei nevatori venhau.
Kunyange hazvo VaMnangagwa naVaMbasogo vakaudza vatori venhau kuti havana zvitsva zvavakazeya mumusangano wavakaita kwemaawa matatu, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University, Doctor Takavafira Zhou, vati zviri pachena kuti VaMbasogo ndivo vave muyananisi pakati paVaMugabe naVaMnangagwa.
Izvi zvinotera kubvutirwa masimba kwakaitwa VaMugabe naVaMnangagwa pakapindira masoja munyaya dzezvematongerwo akamanikidza VaMugabe kusiya chigaro.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri waVaMnangagwa, VaGeorge Charamba kana ivo VaMugabe kuti tinzwe pavamire panyaya iyi.
Zvichakadaro, munyori mukuru musangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists, VaFoster Dongozi, vakashora kurambidzwa kwaitwa vatori venhau kuita basa ravo panga pachisangana VaMugabe naVaMbasogo vachiti zvaitwa izvi zvinotyora kodzero dzevatori venhau munyika.
VaDongozi vatiwo vatori venhau vatarisana nenguva yakaoma pamberi pesarudzo gore dzegore rino vachiti vari kutyira kuti kodzero dzevatori venhau dzichanyanyotyorwa pamberi pesarudzo idzi.
Mushure mekusangana naVaMugabe, VaMbasogo, avo vanoshamwaridzana naVaMugabe, vakaenda zvekare kunosangana naVaMnangagwa kweawa imwe chete vasati vawoneka kudzokera kunyika kwavo.
Vatungamiri vaviri ava vakasangana zvakare nemusi weChina kwemaawa matatu pavanoti vakazeya nyaya dzekusimbadza kudyidzana pakati peZimbabwe neEquatorial Guinea vachiti havana zvitsva zvavakazeya.
Kushanya kwakaita VaMbasogo kunouyawo mushure mekunge VaMnangagwa vakashanyirwa zvakare svondo rino nenhume yemutungamiri weSaharawi Arab Democratic Republic VaBrahim Ghali, VaMohamed-Salem Ould-Salek vanove gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika iyi avo vari kuda kuti nyika yeSaharawi ive nyika yakasununguka.
Kunyange hazvo VaMugabe vari munhu aitsigira kuti Saharawi isununguke, VaMohamed Salem Ould-Salek havana kukwanisa kuonana naVaMugabe.